Certified Banking & Credit Analyst Certification
Finance and Banking industryမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းကောင်းလိုချင်တဲ့ professionals တိုင်းအတွက် Corporate Finance Institute ရဲ့ Certified Banking & Credit Analyst Certification!
CBCA program ဟာ finance and credit analyst များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ skills များ၊ တစ်နေရာထဲမှာ အချိန်မရွေး online ကနေလေ့လာနိုင်တဲ့ self-study program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ program မှာပါဝင်တဲ့ information အသေးစိတ်ကို အောက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်…..
· Credit evaluation & documentation
· Management & business analysis
ပါဝင်တဲ့ subject တွေကလဲ professional တိုင်းအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ course တွေပဲဖြစ်သလို CBCA program ဟာတစ်ကြိမ်ဝယ်ယူရုံနဲ့ lifetime access ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်တန်းကို 100% ပြီးစီး၍ exam အောင်မြင်ပြီးပါက linkedIn profile မှာပါ certified လုပ်လို့ရတဲ့ digital certificate ရရှိမှာဖြစ်ပြီး physical certificate လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် Matrix Smart Learning Solutions မှဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
CBCA certification အတွက် online self-study course ကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကနေကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် normal fees US $497 ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Matrix မှာဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ retail price ထပ် သက်သာတဲ့ ဈေးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အသေးစိတ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ SLS Page ရဲ့chatbox မှတစ်ဆင့် (သို့မဟုတ်) ဖုန်းဖြင့်လဲ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
☎️: 01-8245660, 09-445533288~289
🏦: No.182-194(2nd floor),Botahtaung Pagoda Road(Between Anawrahtar & Mahar Bandoola Rd), Pazuntaung Tsp.,Yangon.
Wiley’s FRM Exam Prep course